पानी पिउने सही समय कुन ?
काठमाडौं- पानी यस्तो प्राकृतिक स्रोत हो जसको प्रयोगबिना मानव जीवको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यसका लागि पानीलाई पृथ्वीको अमृत पनि भन्ने गरिन्छ ...
नेपालीहरूमाझ लोकप्रिय खाजा मम, तर धेरै खाँदा बढ्छ रक्तचाप
काठमाडौं — नेपालीहरूमाझ लोकप्रिय खाजा मम अत्यधिक सेवन हुने गरेको छ । मानिसहरू स्टीम र फ्राई मम स्वाद मानी मानी खाने गर्छन् । तर स्वास्थ्यको हि...
खाली पेटमा यी कुरा खाँदा ध्यान दिऔँ नत्र बिरामी पर्न सक्छ
हामी आफ्नो स्वास्थ्यलाई ठीक राख्न अनेक उपाय अपनाइरहेका हुन्छौं । तर ससानो कुरालाई हामीले वास्ता नगर्दा हाम्रो स्वास्थ्यलाई हानि पुगिरहेको हुन्छ । त्यसैले खानेकुर...
मुटु जोगाउन अनिवार्य गर्नुहोस् यी ५ काम
मुटु शरीरको यस्तो अंग हो जसलाई स्वस्थ राख्न नसक्दा मानिसले कतिबेला आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउन पुग्छ थाहा नै हुँदैन । बाहिर स्फूर्त देखिने व्यक्ति पनि मुटु अस्वस्थ भएकै कारण मृत्युको मुखमा पुग्न सक्छन् । जसरी ...
टमाटरका यी १० फाइदा
तरकारीलाई स्वादिलो बनाउनका लागि गोलभेडाको प्रयोग आजभोली अनिवार्य जस्तै भएको छ । सूपको रुपमा, अचारको रुपमा तथा श्रृंगारको सामानको रुपमा समेत गोलभेडाको प्रयोग हुने गरेको छ । टमाटरबाट भिटामिन सी, लाइकोपी...
प्राकृतिक चिकित्सालयमा राखिएका ५० जना कोरोना मुक्त
भरतपुर महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित प्राकृतिक चिकित्सालय आइसोलेशनबाट ५० जना कोरोना सङ्क्रमित निको भइ घर फर्किएका छन् । भरतपुर– १ बागेश्वरीमा र...
गुर्जाेको रस कोरोनाविरुद्ध अचूक !
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढेसँगै तनहुँ जिल्लामा गुर्जो सेवनप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको छ । रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि गुर्जो सेवनप्रति...
गर्भमा रहेको शिशुका लागि अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ यी खानेकुरा...
गर्भावस्थामा रहँदा महिलाले आफ्नो तथा शिशुको स्वास्थ्यमा निकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । गर्भमा रहेको बच्चाको सहि विकासका लागि महिलाले खानपानमा विशेष ध्यान पुर्&...
सरकारले कोरोनासामु हात उठाएपछि भार गाउँको सिंहदरबारमा, के गर्दैछन् स्थानीय तह ?
कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) नियन्त्रणमा संघीय सरकारले हात उठाएपछि सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारहरूको काँधमा पुगेको छ । सरकारले लामोदुरीका याताया...
यी हुन् मिर्गौला स्वस्थ राख्ने खानेकुरा
शरीरलाई स्वस्थ राख्नका लागि मिर्गौला ठीक हुनु जरूरी हुन्छ । मिर्गौलाले हाम्रो शरीरबाट फोहोर र बढी भएको पानी फिल्टर गरेर पिसाबबाट बाहिर निकाल्छ । मिर्गौला ...
नङले बताउछ स्वास्थ्य स्थिती, कस्तो छ तपाईको नङ ?
सफा, स्वस्थ र सुन्दर नङले व्यक्तित्व बढाउँछन् । यिनले स्वास्थ्यको स्थिति पनि बताउँछन् । नङ छालाको एक महत्त्वपूर्ण भाग हो । मृत कोशिकाहरूबाट नङ बन्छ । नयाँ कोशीक...
के हो मस्तिष्कघात, किन हुन्छ ? ​
मस्तिष्कका विशेष भागहरूमा रगत प्रवाहमा बाधा हुँदा मस्तिष्कघात हुने गर्छ । मस्तिष्कका रक्तनलीबाट रक्तस्राव हुँदा पनि अकस्मात् यस्तो समस्या आउने गर्छ । मस्तिष्कघातको...
मुटु मानव शरीरको एक प्रमुख जीवनदायी अंग हो । मुटु स्वस्थ राख्न हामीले केही खराब बानी त्याग्नै पर्छ । चर्को नुनिलो वा गुलियो खाँदा रक्तनली मोटो भएर ...
राति सुतेपछि हरकोहीले बेलाबेला सपना देख्छन्। कसैले बिहान उठ्दा सपना सम्झिन्छन् भने कसैले बिर्सिन्छन् । तर देख्न चाहिँ सबैले सपना देख्छन् नै । मनोवै...
तपाईंको छालाको रंग फेरिएको त छैन ? ठूलो रोगको लक्षण पनि हुनसक्छ
हाम्रो शरीरमा अनेकथरी परिवर्तनहरू आइरहेका हुन्छन् । कतिपय अवसरमा यी ससाना परिवर्तन कुनै ठूलो रोगका लक्षण पनि हुनसक्छन् । यिनलाई सही समयमा चिनियो भने ठूलो र...
तरकारीलाई स्वादिलो बनाउनका लागि गोलभेँडाको प्रयोग आजभोली अनिवार्य जस्तै भएको छ । सूपको रुपमा, अचारको रुपमा तथा श्रृंगारको सामानको रुपमा समेत गोलभेडाको प्...
यी सात 'सुपर फूड' जसले तपाईंको इम्युनिटीमा आउन दिँदैनन् कुनै आँच
खानपानमा ध्यान नदिंदा इम्यूनिटी पावरमा कमी आउँछ । अहिले केही रिपोर्ट्सहरूले इम्यूनिटी पावर कमजोर भएकाहरूलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको खतरा बढी हुने जनाइर...
शीघ्र निर्माण भएका ४ आयोजना सेनाद्वारा स्थानीयलाई हस्तान्तरण